Indlela yokuzoba imithi kwi-Procreate: Isinyathelo ngesinyathelo isifundo sokuzoba | Abadali be-Intanethi
Indlela yokuzoba imithi kwi-Procreate
UNerea Morcillo | 17/05/2022 16:00 | ngokubanzi, Tutorials
Umthombo: Iziko loYilo
Umzobo uyafumaneka kuye wonke umntu yonke imihla, ngenxa yezinto ezintsha kunye nophuhliso lwezicelo kunye nezixhobo ezenza umsebenzi ube lula. Ngaphambili, sasinephepha elilula kuphela kunye nepensile okanye usiba lokuzoba, sasingakwazi ukwenza idijithali yonke into esiyiyile.
Kodwa ekuhambeni kwexesha, izixhobo ezinje ngeProcreate zeza, ekwaziyo ukunyusa umthamo wethu wezandla ekuzobeni kwaye sikwazi ukuyila njengoko sithanda, ngaphandle kokushiya nantoni na ngasemva.
Kungenxa yesi sizathu ukuba kule post, sikuzisela icandelo elitsha le-Procreate, isixhobo sokuzoba esiye saba sefashonini kwiminyaka yakutshanje. Siza kukuxelela ngayo, kwaye ukongeza, siya kukubonisa isifundo esifutshane apho siya kuchaza indlela yokuzoba, ngakumbi iimilo ezinjengomthi.
1 Ukuvelisa: imisebenzi kunye neempawu
2 Isifundo: Uzoba njani umthi kwi-Procreate
2.1 Inyathelo 1: Yenza i-canvas
2.2 Inyathelo lesi-2: Iimilo zokuQala kunye neMilinganiselo
2.3 Inyathelo 3: Peyinta umzobo wakho
2.4 Inyathelo lesi-4: Faka i-glitter kwaye ugqibile
3 Olunye ukhetho
Ukuvelisa: imisebenzi kunye neempawu
Umthombo: UbuGcisa beDijithali
Ukuqonda ngcono eli candelo, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo ukuba yintoni iProcreate. Ukwenza oku, siza kuphonononga ngokukhawuleza intshayelelo encinci yocwangciso. Thatha iphepha kunye nosiba kwaye uqaphele into esiza kukuxelela yona, kuba iya kuba nomdla kakhulu kuwe kwaye iya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni kuyilo.
Qalisa ichazwa njengenye yeenkqubo zokuzoba okanye izixhobo ezigqwesileyo. Yaphuhliswa kwi-Savage Interactive kwaye yadalwa ngonyaka ka-2011. Ngeli xesha, i-Procreate ibe sisixhobo. isetyenziswa ngokubanzi ngamagcisa kunye nabayili, igxininisa ukusetyenziswa kwezinto zayo ezisetyenziswa kakhulu kunye neziluncedo okanye izixhobo ezifana neebrashi, imibala kunye nezinye izixhobo ezikunceda ukuba wenze imizobo yakho ngokufanelekileyo.
Sisixhobo esiyiliweyo izakusetyenziswa kwizixhobo ezifana ne-IPad, kuba inobukhulu obuchanekileyo kwaye ngenxa yomgangatho onikezelayo kumfanekiso.
Kanye njengezixhobo ezinje ngePhotoshop, kwiProcreate usebenza ngezaleko. Iileya zikunceda ukuba usasaze zonke iintshukumo ozenzayo ngexesha lomzobo. Umzekelo, ungacwangcisa isibetho ngasinye osisebenzisayo, okanye isiqalelo ngasinye ukusuka kwizithunzi ukuya kwiimilo, kuluhlu ngalunye onokuthi uludale. Ezi maleko aziyi kukunceda ulungelelanise iprojekthi yakho kwaye wazi ukuba iphi na into nganye ngamaxesha onke, kodwa zikwayinxalenye yenkqubo yenkqubo, kwaye zisisixhobo esibalulekileyo sokukwazi ukuphuhlisa okanye ukuyila ngokuchanekileyo.
Inoluhlu olubanzi lweebrashi kunye neerabha. Iibrashi ziya kukunceda ngalo lonke ixesha ukuphuhlisa ngcono yonke into oyibonisayo. Ukongeza, unakho ukukhetha ukukhuphela amakhulu eebhrashi zasimahla kwiiwebhusayithi ezininzi kwaye uzifake ngokukhawuleza kwi-Procreate. Awusenaso isizathu sokungazobe.
Ikwanayo ne inxalenye yoopopayi abancedisiweyo, ifana nenxalenye encinci esebenzisanayo yenkqubo ngokwayo, apho uya kukwazi ukuzoba ngokukhawuleza kwaye unike ubomi kwimizobo yakho kwaye uyibone ngeso lengqondo.
Umbala ukwaphawulwe njengesixhobo esiphambili sale nkqubo, apho unokufumana khona izintlu ezahlukeneyo, ukusuka kwezona zibandayo ukuya kwezona zishushu.
Isifundo: Uzoba njani umthi kwi-Procreate
Inyathelo 1: Yenza i-canvas
Umthombo: Izifundo zobuGcisa
Into yokuqala esiya kuyenza ngaphambi kokuba siqale kukwenza i-canvas apho siza kwenza khona umzekeliso wethu okanye umzobo. Ukwenza oku, siya kuqhuba isicelo kwaye Siza kucofa i + icon ibekwe phezulu ekunene kwesikrini. Luphawu olubonisa ukuba siza kuqalisa iprojekthi entsha, ngoko ke siya kuqalisa ukusuka ekuqaleni kunye netafile engenanto ngokupheleleyo nengenanto yokusebenza.
Nje ukuba sicofe kuyo, iwindow encinci enohlobo lwe-canvas eya kuthi ngenkcazo ibonakale kwangoko. Iyakuqulatha imilinganiselo ethi inkqubo ngokwayo isinika yona kodwa thina sinokusebenzisa ezo ziwufanele kakhulu umzobo wethu.
Inyathelo lesi-2: Iimilo zokuQala kunye neMilinganiselo
Emva kokuba silungiselele itafile okanye i-canvas yethu, siya kukhetha ibrashi efanelekileyo ngokusemandleni. Kwaye siza kuqala zoba isangqa somzuzu kwiseyile. Ukwenza oku, siya kusebenzisa umbala onjengomnyama.
Okulandelayo siza kuzoba eminye imilinganiselo yomthi, inxalenye yesiqu kunye namanye amasebe. Kubalulekile ukuba siqale senze umzobo omncinci wokuqala apho kuphela imilinganiselo esiyaziyo ngokwendalo iboniswa.
Xa sele sinomzobo owenziweyo, siqhubela phambili ukudala umaleko omtsha apho siya kuyinki yintoni eya kuba yinxalenye yomlinganiselo ngamnye. Kuyo, siya kukhetha ibrashi apho siya kuphinda siqinise iimilo esiyidalile kwaye ngokulandelayo, siya kusebenzisa ukuthungwa ngebrashi efanayo kumthi wethu.
Kwakhona siya kudlala kunye nobukhulu bomgca, ukusuka kumncinci ukuya kwimigca enzima. Ngale ndlela, sinokukunika ukuthungwa esikwaziyo kwaye sikwenze kube sengqiqweni ngakumbi.
Inyathelo 3: Peyinta umzobo wakho
Umthombo: Ipeyinti yesitudiyo sekliphu
Ukupeyinta umzobo, siya kudala umaleko omtsha, kwaye oku, siya kukhetha ibrashi yepeyinti. Yibrashi etyebileyo kunezinye kwaye yomelele kakhulu.
Okokuqala siya kwenza inxalenye yezibane. Kwizibane, kufuneka sikhethe i-hue eluhlaza okwesibhakabhaka ebonakala ifana ngokunokwenzeka kwi-yellow. Kwaye ngale ndlela, siya kuqala ukupeyinta enye yeekona zomthi wethu. Siza kudibanisa imibala emithathu eyahlukeneyo, i-yellow enzulu, i-ocher eyancipha kwaye ekugqibeleni ibe mhlophe enika ukukhanya okufunekayo.
Emva kokuba sinezibane, siqhubela phambili ekupeyinteni izithunzi. Kwizithunzi, siya kudala umaleko omtsha kwaye senze uhlobo lwegradient kodwa ngemibala emnyama. Le mibala ingaba: grey, black and white. Singakwazi kwakhona ukuthoba i-opacity kunye nokuqina kwemibala yethu, ukuze ngale ndlela, ibonakale iyinyani.
Nje ukuba sibe nezibane kunye nezithunzi, siye saqhubeka sikhetha i-brushstroke yokugqibelela kombala, ezi brashi zidla ngokuzalisa indawo ebesele siyipeyintwe eluhlaza bumnyama okanye indawo esingayizalisanga. Le nxalenye iya kuba yinxalenye yokugqibela yale nkqubo.
Inyathelo lesi-4: Faka i-glitter kwaye ugqibile
Xa sele siwuzobile umthi wethu, kuya kufuneka sisebenzise ukukhanya okuncinane kuwo.
Ukwenza oku, siya kukhetha ibrashi entsha kwaye senze oko kuya kuba ngumaleko wokugqibela. Ngebrashi ethambileyo esinayo, siya kukhetha umbala omhlophe kwaye siya kuthoba amandla okanye opacity yebrashi, ide ingabonakali.
Nje ukuba siqwalasele uluhlu lombala kunye nobunzulu, siya kuqhubekeka kwi-inki umzobo wethu phezu kwawo ngebrashi. Kubalulekile ukuba siphumelele nje kancinci, ekubeni ukuba senza ezininzi, umbala omhlophe uya kuqiniswa kwaye siya kushiywa nebala elikhulu elingenantsingiselo elimhlophe kumzobo wethu.
Ugqibile, sele unomthi wakho ozotywe ngokugqibeleleyo.
I-Adobe Illustrator yenye yesoftware eyinxalenye yeAdobe, kunye sisixhobo esifanelekileyo sokwenza umsebenzi wobugcisa, iivektha, kunye nemifanekiso. Iqulethe izixhobo ezikwaziyo ukudala kunye nokulawula ii-vectors, ngenjongo yokuyila amanqaku okanye ezinye izinto ezinomdla kuyilo. NjengoProcreate, nayo inoluhlu olubanzi lweebrashi, apho unokuphuhlisa khona imizobo yakho. Ikwanethuba lokukwazi ukukhetha phakathi koluhlu lwemibala eyahlukeneyo, ukusuka kwiPantone ukuya kwezona zisisiseko.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Illustrator sisicelo osifunayo ukuba usifake kwisixhobo sakho. Yinkonzo ehlawulwayo, njengoko iqulethe ilayisenisi yonyaka neyenyanga. Kodwa unesilingo sasimahla seentsuku ezi-7 sokuba uzame. Kwaye ngokungathi oko akonelanga, xa uthenga ilayisenisi, awufumani i-Illustrator kuphela ngembuyekezo, kodwa unokuzama usetyenziso olwahlukileyo olwenziwa yi-Adobe. Awunakuzoba kuphela, kodwa uphinde uthinte iifoto zakho, wenze ii-mockups, uyila amaphepha ewebhu, wenze iibrendi, uyilo iimagazini okanye iipowusta kunye nokunye okuninzi.
Zama esi sixhobo simahla ongayi kukwazi ukuphoswa kuso.
Ukuba i-Adobe Illustrator ayikukholisanga, ngokuqinisekileyo i-GIMP iya kwenza ngaphandle kwamathandabuzo. Yeyona nguqulelo yasimahla yePhotoshop kunye ne-Illustrator yasimahla. Ngayo, awukwazi ukudala imifanekiso emihle kuphela, kodwa uphinde uhlaziye imifanekiso.
Inephakheji yeebrashi eziya kukunceda kwiiprojekthi zakho kunye noyilo. Ukongeza, sisixhobo esifumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMac.Ngaphandle kwamathandabuzo, ikuvumela ukuba ufakele imibala eyahlukeneyo yegradients ukuze imizobo yakho kunye nokuhlelwa kwakho kungawi.
Isicelo esigqibeleleyo sokukwazi ukudweba ngokukhululekileyo, ngaphandle kweendleko okanye izibophelelo.
Okokugqibela, sineKrita. I-Krita sesinye sezona zixhobo zidumileyo zokuyila kunye nokwenza imizobo kwiiWindows. Ifaka uluhlu olubanzi lweebrashi, iibrashi, iirabha kunye nemibala, ngoko unokuzalisa imizobo yakho ngobomi.
Ikwasebenza ngokwamaleko, ke uya kuyifumana ikhululekile kakhulu ukusebenza nayo. Kwaye ngokungathi oko akwanelanga, kananjalo Inethuba lokuvula nokujonga iifayile zePhotoshop (PSD). Isixhobo esiya kuvuthuza ingqikelelo yakho kwaye unokuziva ukhululekile ngaso.
Enye ingxaki kukuba unokuba neengxaki zokutshaja ngaxa lithiles kuba ineengxaki ezithile, kodwa kungenjalo sisixhobo esigqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokuzoba imithi kwi-Procreate